တရုတ်နိုင်ငံသည်ဖန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံများကိုလမိုင်းသုတ်ခြင်း Joyshing ဖန်ခွက်
Bulding Glass ကို
ကွေး Tempered Glass ကို
Tempered Glass ကို
တံခါးပိုး - ဖန်ခွက် Glass မှာ
စမတ် Glass ကို & Pdlc ရုပ်ရှင်
Table top ဖန်ခွက်
Pritted Glass ကို
စူပါအရွယ်အစား Glass ကို
လမိုင်း Glass ကို
အလွန့်အလွန်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှု - PVB interlayer သည်ထိရောက်မှုမှထိုးဖောက်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ဖန်ကွဲအက်နေလျှင်တောင်မှခွဲထွက်သည့်အရာများသည်ကွဲလွင့်ခြင်းမရှိဘဲအလွှာကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ အခြားဖန်အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလမိုင်းဖန်သည်ထိတ်လန့်မှု၊ ဖောက်ထွင်းမှု၊
1. အလွန်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှု:PVB အလွှာသည်ထိရောက်မှုမှထိုးဖောက်ခြင်းကိုဆီးတားသည်။ ဖန်ကွဲအက်နေလျှင်တောင်မှခွဲထွက်သည့်အရာများသည်ကွဲလွင့်ခြင်းမရှိဘဲအလွှာကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ အခြားဖန်အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလမိုင်းဖန်သည်ထိတ်လန့်မှု၊ ဖောက်ထွင်းမှု၊
2. စွမ်းအင်ချွေတာသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ: PVB အလွှာသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပြန့်နှံ့စေပြီးအအေးခံခြင်းကိုလျှော့ချသည်။
အဆောက်အ ဦး များသို့ 3. ဗေဒဆိုင်ရာအသိကိုဖန်တီးပါ။ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအကြားအလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်သားများသည်အဆောက်အအုံများကိုအလှအပနှင့်ဗိသုကာများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောပတ် ၀ န်းကျင်အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီစေလိမ့်မည်။
4. အသံထိန်းချုပ်မှု PVB interlayer သည်ထိရောက်သောအသံ၏စုပ်ယူနိုင်မှုဖြစ်သည်။
5. ခရမ်းလွန်စိစစ်: အကြားအလွှာသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုစစ်ထုတ်ပြီးပရိဘောဂများနှင့်ကုလားကာများကိုဖျောက်ဖျက်ပေးသည်
PVB အရောင်: ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ကြေး၊ မီးခိုးရောင်၊
ဖန်အရောင်: ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အလွန်ရှင်းလင်းသော၊ ပြင်သစ်အစိမ်း၊ အမှောင်စိမ်း၊ Ford အပြာရောင်၊ အပြာ၊ ကြေးဝါ၊
အထူ: ၃ + ၀၃၈ + ၃ မီလီမီတာ၊ ၄ + ၀.၃၈ + ၄ မီလီမီတာ၊ ၅ + ၀၃၈ + ၅ မီလီမီတာ၊ ၆ + ၀၃၈ + ၆ မီလီမီတာ၊ ၃ + ၀.၇၆ + ၃ မီလီမီတာ၊ ၄ + ၀.၇၆ + ၄ မီလီမီတာ၊ , တောင်းဆိုမှုကိုနှုန်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အရွယ်အစား - 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2440x3660 စသည်တို့ကိုသင့်လိုအပ်သလိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အလွန်အမင်းမြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှု - PVB interlayer သည်ထိရောက်မှုမှထိုးဖောက်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ဖန်ကွဲအက်နေလျှင်တောင်မှခွဲထွက်သည့်အရာများသည်ကွဲလွင့်ခြင်းမရှိဘဲအလွှာကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ အခြားဖန်အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလမိုင်းဖန်သည်ထိတ်လန့်မှု၊ ဖောက်ထွင်းမှု၊
၂။ စွမ်းအင်ချွေတာသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ - PVB ကြားခံသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပြန့်ပွားစေသည်။ အအေးဝန်များကိုလျှော့ချသည်။
၃။ အဆောက်အအုံများကိုဗေဒင်ဆန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖန်တီးပါ။ အရောင်တောက်တောက်နှင့်အတူအလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်သားများသည်အဆောက်အအုံများကိုလှပစေပြီးသူတို့၏ပုံပန်းသဏ္surroundingာန်များသည်ဗိသုကာများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောပတ် ၀ န်းကျင်အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
4. Sound control: PVB interlayer သည်ထိရောက်သောအသံစုပ်ယူနိုင်မှုဖြစ်သည်။
(၅) ခရမ်းလွန်စိစစ်ခြင်း - အလွှာသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ ပရိဘောဂနှင့်ကုလားကာမှေးမှိန်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
-Railings / ခြံစည်းရိုး / baluster / balustrade အိမ်, စျေးဝယ်။
ရှေ့သို့ insulated Glass
နောက်တစ်ခု: Tempered Glass ကို
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Laminated Glass ကို
Laminated Glass ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း
ထည် Laminated Glass ကို
Laminated Glass ကို
Laminated Glass တံခါး
Laminated Glass Panel များ
Laminated Glass ကို Windows
Laminated Insulator တွင်လည်းဖန်ခွက်
Laminated Tempered Glass ကို
အဖြူရောင် Laminated Glass ကို